haino aman-jery > Journal succession > 2014-03 mpandimby ny Magazine > Amin'ny fotoana mety amin'ny toerana mety
Tamin'ny fivoriana fivarotana mpanjifa iray tao amin'ny iray amin'ireo fivarotay, dia nisy mpiasa iray nilaza tamiko momba ny paikadiny: "Tsy maintsy ho ao amin'ny toerana mety ianao amin'ny fotoana mety." Nihevitra aho fa marina io tetikady io. Na izany aza, ny zavatra iray manontolo dia mora lazaina fa vita. Efa tao amin'ny toerana mety aho tamin'ny fotoana mety - ohatra, rehefa nandeha an-tongotra nandehanana teo amin'ny tora-pasika aho tany Aostralia ary nahita andian'olona izay vao avy nahita trozona. Andro vitsy talohan'izay dia nahavita nahita vorona tsy fahita firy aho, i Hans nihomehy. Tsy tianao ve ny ho eo amin'ny toerana mety amin'ny fotoana rehetra? Indraindray dia kisendrasendra no mitranga izany, fa hafa kosa valin'ny vavaka. Zavatra tsy ahafahantsika mikasa na mifehy.
Raha eo amin'ny toerana mety amin'ny fotoana mety isika, dia misy olona milaza azy io ho antokon-kintana ary ny hafa miantso azy io ho vintana. Ny mpino dia tia miantso ny toe-javatra toy izany hoe "fidiran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika" satria mino izy ireo fa Andriamanitra no nandray anjara tamin'izany toe-javatra izany. Ny fitsabahan'Andriamanitra dia mety ho toe-javatra rehetra izay toa nampitambatra ny olona na ny toe-javatra ho amin'ny tsara. “Fantatsika anefa fa ny zavatra rehetra dia mahasoa ny tsara indrindra amin’izay tia an’Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany.” (Romana 8,28). Io andinin-teny fanta-daza sy tsy takatry ny saina indraindray io dia tsy voatery midika fa ny zava-mitranga rehetra eo amin’ny fiainantsika dia tarihin’Andriamanitra sy fehezin’izy ireo. Mampirisika antsika hitady ny tsara indrindra anefa izy, na dia ao anatin’ny fotoan-tsarotra sy mampahory aza.
Rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy dia nanontany tena ihany koa ny mpanara-dia azy hoe ahoana no hampisy io zavatra niainana mampivarahontsana io. Ny sasany tamin'ireo mpianany dia niverina tamin'ny fiainany taloha ary niasa ho mpanarato satria nametra-pialana izy ireo fa ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana dia midika fa ny fiafaran'i Jesosy sy ny nanirahana azy. Nandritra ireo telo andro teo anelanelan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganana amin'ny maty dia toa very ny fanantenana rehetra. Saingy rehefa nianatra ny mpianatra taty aoriana sy araka ny fantatsika anio dia tsy nisy very niaraka tamin'ny hazo fijaliana, fa ny zava-drehetra no nandresy. Ho an'i Jesosy, ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy ny farany akory, fa ny fiandohana fotsiny. Andriamanitra dia efa nikasa hatrany am-piandohana fa hisy zavatra tsara hivoaka amin'ity toe-javatra toa tsy mety hitranga ity. Tsy kisendrasendra fotsiny na fitsabanan'Andriamanitra, drafitra nataon'Andriamanitra hatrany am-piandohana. Ny tontolon'ny tantaran'ny olombelona dia nitarika ho an'io fiovana io. Izany no teboka ivon'ny drafitry ny fitiavana sy fanavotan'Andriamanitra.
Jesosy dia teo amin'ny toerana tena mety tamin'ny fotoana mety ary noho izany dia eo amin'ny toerana misy antsika foana isika. Tena ao amin'ny toerana tian'Andriamanitra anaovana antsika isika. Ao anaty sy amin'ny alalany isika dia voaro tsara ao amin'ny Ray, Zanaka ary ny Fanahy Masina. Tiany ary navotany tamin'ny hery mitovy natsangan'i Jesosy tamin'ny maty. Tsy mila miahiahy isika raha misy vidiny ny fiainantsika ary misy fiovana eto an-tany. Na manao ahoana na manao ahoana ny toeran'ny fiainana manodidina antsika, afaka mahazo antoka isika fa hiaraka ny zava-drehetra satria tian'Andriamanitra isika.
Tahaka ny nananganan'ny vehivavy sy ny mpianatra tamim-paniriana mafy nandritra ireo andro maizina telo ireo, dia indraindray manidina ao anatin'ny famoizam-po isika eo amin'ny fiainantsika manokana na ny ain'ny hafa satria tsy misy fanantenana hita. Fa Andriamanitra kosa handringana ny ranomaso rehetra ary hanome antsika fahatsarana tsara antenaina. Izany rehetra izany dia mitranga satria tamin'ny toerana mety i Jesosy.